रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का ३ महिनाका कोरोनासंक्रमित बालकलाई क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ ।
बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पताल र एन्फा एकेडेमीस्थित आइसोलेसन सेन्टरमा बेड खाली हुँदाहुँदै पनि बालकका परिवारलाई बेड अभाव भएको बहना बनाउँदै गाउँमै फर्काएर विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा बच्चालाई गरगरेस्थित लुम्बिनी ज्ञान निकेतन माविको चिसो छिंडीमा राखिएको छ ।
बच्चाको परिवारले आइसोलेसन बेड उपलब्ध गराइदिन बिलौना गरेका छन् । शनिबार आएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्टमा बच्चालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
संक्रमित बच्चाकी आमा सरला योगीले आइसोलेसन बेड अभाव भएको भनेर बच्चालाई क्वारेन्टाइनमा फर्काइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यस्तो गर्मी छ, सर्पको डर छ, बच्चालाई भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ । पटक–पटक लाइन काटिँदा कोठा गर्मीले उकुसमुकुस हुन्छ, सबैले आइसोलेसन अस्पताल लैजानुपर्ने भयो भने तर, कसैले सुनेनन्, बुटवल लगेर बेड अभाव भन्दै स्कूलमै ल्याएर राखे ।’
‘आइसोलेसनमा बस्न पाए, कम्तिमा डाक्टरसँग सम्पर्क हुने थियो, के खुवाउने ? कसरी राख्ने भन्ने त जानकारी दिने थिए,’ आमाले दुखेसो पोखिन् ।
बच्चासहित तीनजना संक्रमित एउटै कोठामा छन् । तीनजना संक्रमितसँगै संक्रमण नदेखिएकी बच्चाकी आमा सरला पनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उनले मास्क लगाएर बच्चालाई दुध चुसाउँछिन् । सरला पनि मुटुको रोगी छिन् ।
बच्चा पेटमा छँदा उनको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको थियो । ‘म पनि बिरामी छु, राम्रो खाना छैन, बच्चालाई दूध पुग्दैन, यहाँ झन बिरामी भइने डर भो ।’
वैशाख १२ गते योगीको परिवार भारतको नयाँदिल्लीबाट आएको थियो ।
पाँच जनाको परिवार आएकोमा बच्चा र बच्चाको हजुरआमालाई कोरोना देखिएको छ, भने आमा सरला र बुवा मोतिलाललाई संक्रमण देखिएको छैन ।
विद्यालयका उनीहरू बस्ने कोठमा बच्चाकी हजुरआमा ४० वर्षिया र सोही गाउँपालिका १९ वर्षिया युवा बसेका छन् ।
‘राम्रो खाना पनि छैन, दालभात दिन्छन् । तातो पानी पनि पाइँदैन । यहाँ बस्दा त मलाई पनि संक्रमण देखिन्छ कि भन्ने डर भएको छ,’ आमा सरलाले भनिन् ।
विद्यालयमा अहिले ५० जनालाई राखिएको छ ।
उनीहरू ३० जनाको समूहले दिल्लीबाट नेपाल–भारत सीमा नाका सुनौलीसम्म प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले गाडी रिजर्भ गरेर आएका थिए ।
सीमामा आएपछि उनीहरूलाई गाउँपालिकाले उद्दार गरेर क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखेको थियो ।
गाडीको पार्टपूर्जाको कम्पनीका काम गर्ने योगी उद्योग बन्द भएपछि दुई महिना खाली बसेका थिए ।
कोरोना संक्रमण दिल्लीमा झनै तीव्र रूपमा फैलिएपछि उनीहरू गाउँ आउने निचोडमा पुगेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोकर्णराज क्षेत्रीले बच्चालाई बुटवलको आइसोलेनमा लगिएपनि बेड छैन भनेर फर्काएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रादेशिक अस्पतालमा लगियो तर, त्यहाँ चिकित्सकहरूले बेड छैन, गाउँमै लैजानुहोस् भनेपछि फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो ।’
संक्रमितका बाबा मोतिलालले आइसोलन मिलाइदिन सबैतिर भन्दा पनि बच्चामा कोरोनाको लक्षण नदेखिएको भन्दै कसैले नसुनेको बताए ।
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले २५ बेड खाली छन् ।
कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले बच्चालाई आइसोलेन राख्ने विषयमा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डा. नेत्र रानासँग बुझ्न आग्रह गरे ।
डा. रानाले लक्षण नदेखिएसम्म गाउँकै आइसोलेसनमा राख्ने कुरा भएको हुँदा कर नगरिएको बताए ।
परिवारले ल्याउन चाहेमा अस्पतालका बेड खाली रहेको भन्दै ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
कञ्चन गाउँपालिकामा अहिले संक्रमितको संख्या ८ पुगेको छ भने रूपन्देहीमा २१८ संक्रमित छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै कोरोना संक्रमण भएको तर, लक्षण नदेखिएको अवस्थामा जहाँ बसेको छ, त्यहीँ बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।